Pinebook Pro, iyo laptop yeLinux isingasviki madhora mazana maviri emadhora | Linux Vakapindwa muropa
Makambani mazhinji uye mazhinji ari kuona kugona kweLinux kuve yakasarudzika sisitimu yekushandisa yezvigadzirwa zvavo uye mabhenefiti anouya nekutora yemahara software.
Kune rimwe divi, makambani anoda PINE64 anga aripo kubva pakutanga, yakazvipira kuLinux uye yayo portfolio yemidziyo inoratidza izvi nenhamba yakanaka yezvigadzirwa zvaunogona kutenga nemutengo wakanaka kwazvo.
Munguva pfupi yapfuura, kambani yakazivisa nyowani chinotakurika nakisa kudhura kurova masherufu muna Nyamavhuvhu.
Itsva pine book Pro ndeye $ 199 laptop inouya nezvimiro zvinokwana mushandisi wepakati asi izvo zvakare vangashamise mushandisi wepamberi.
Chekutanga pane zvese, iyo pine book Pro inouya ne1.8GHz ARM mbiri-yakakosha processor Cortex A72 uye ina cores ARM pa1.4GHz Cortex A53 pamwe ne4 GB yeLPDDR4 RAM.
Izvi hazvisi izvo zvakajairika kurongedza zvaunotarisira kubva palaptop, asi zvinokwana kuita zvakakosha mabasa sekufambisa internet kana kutumira maemail.
Pamusoro pezvo, maererano ne Hardware, iyo pine book Pro inouya ne64GB eMMC 5.0 yekuchengetedza uye Mali T-860 processor ine yakajairwa Bluetooth 5.0 yekubatanidza uye Wifi.
Panyaya yekubatana, iyi laptop nyowani inouya ne USB 3.0 chiteshi uye USB 2.0 yerudzi rwechiteshi A, iyo mhando C chiteshi inogona kushandiswa kubhadharisa kana kubatanidza masikirini. Zvimwe zvinhu zvinosanganisira chiteshi cheheadphone, yekuisa MicroSD, maikorofoni yakavakirwa, uye a kamera pamberi pe2 megapixels.
Iyo Laptop inounza 14-inch LCD skrini ine 1920 × 1080 resolution, inozoshandira mabasa zvinokosha, senge zvimwe zvese zvinhu.
Nhau dzakanaka ndedzekuti pine book Pro chishandiso chinotakurika, ndokuti, inongorema 1.26 kilos chete, saka zviri nyore kuenda nayo kwese kwese. Iyo 10,000 mAh bhatiri inopa iyo chinotakurika vakakwira Maawa gumi ehupenyu hapana chikonzero chekuchaja.
Bhuku rePine Pro inotengeswa pa $ 199 uye ichasvika mwedzi unouya pazvitoro zvakasarudzwa nekambani uye kubva kwayo peji web.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Pinebook Pro, iyo laptop yeLinux isingasviki $ 200
David restrepo akadaro
Ini ndinoshamisika kana ndangariro yegondohwe inogona kuwedzerwa, mune iyo kesi ingave iri sarudzo yakanaka kwazvo kwete chete kune vanotanga vashandisi ...
Pindura kuna David Restrepo
musiyano upi musimba uripo nePi4 ???
GNU Taler, iyo "nzira yeBitcoin" yakataurwa naRichard Stallman
RetroArch 1.9.0 yakatoburitswa kare uye inouya nekumwe kugadzirisa